Cayaaraha adduunka oo maanta furmaya - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Cayaaraha adduunka oo maanta furmaya
La daabacay fredag 11 juni 2010 kl 09.53
Maanta oo jimcaa ayaa dalka koonfur Afrika waxaa ka bilaaban doona tartanka adduunka ee kubadda cagta ,waana markii ugu horeesey taariikhda oo tartankaan muhiimka ah lagu qabto qaaradda Afrika.
Tartankaan ayaa socon doona muddo bil ah oo ah inta u dhaxeeysa 11-ka juun ilaa iyo 11-ka july waxaana ka qeeybqaadan doona xulalka qaranka 32 dal oo ka kala yimid qaaradaha adduunka,cayaaraha ay kooxahaasi isaga hor imaanayaana waxay guud ahaan dhan yihiin ilaa iyo 64 cayaarood.
Cayaarta ugu horeeysa oo lagu furayo tartankaan koobaha adduunka ,ayaa dhexmari doonta xulka qaranka Koonfur Afrika oo isagu tartankaan martigalinaya iyo dalka Mexico.
Qaaradda afrika tartankaan waxaa uga qeeybgalaya lix dal oo kala ah Koonfur Afrika ,Negeria,Algeria,Ghana ,Camarun iyo Ivory Coast.
Dalkaan Iswiidhan ayaan isagu cayaarahaan ka qeeybgaleeyn maadaama lagu reebey isreebreebkii hore ,inkastoo hadana ay jiraan tababarayaal Iswiidhish ah oo cayaarahaas ka qeeybgalaya .
Laba ka mid ah kooxahaas qaaradda Afrika matalaya ayaa waxaa tababarayaal u ah laba tababare oo dalkaan Iswiidhan u dhashey,kuwaas oo kala ah tababarihii horee xulka qaranka Iswiidhan Lars Lagerbäck oo iminka hogaaminaya xulka qaranka Nigeria ,iyo tababarihii horee xulka qaranka England Sven-Göran Eriksson oo iminka ah tababaraha xulka qaranka dalka Ivory Coast.
Malaayiin qof oo xiiseeya cayaaraha adduunka ee kubadda cagta ayaa talafishinada la iska arko iyo idaacadaha kala socon doona tartankaas ka dhici doona sagaal magaalo oo kala duwan oo dalka Koonfur Afrika ku yaal.
Koonfur Afrika ayaa marti galinta tartankaan 2010-ka ,waxay u soo martey halgan dheer ,waxayna aakhirkii ka guuleeysatey dalka Marooko oo kula tartamayey marti galinta cayaarahaas adduunka.
Kooxaha koobkaan ku tartamaya oo ay ku jiraan qaar badan oo ka mid ah laacibiinta adduunka ugu caansan , ayey adag tahay in la saadaaliyo cidda ku guuleeysan doonta koobkaas.
Su'aalaha dad badani isweeydiinayaan ayaa waxaa ka mid ah xulka qaranka talyaaniga oo afar sano ka hor qaadey koobkii adduunka oo midkaan ka horeeyey ,ma xafidan doonaan markaanna koobkaas dahabiga ah ,mase laga yaabaa in dalka spain koobkaan qaado , iskuna darsado koobka yurub oo uu horey ugu guuleeystey iyo kan adduunka labadaba,yaase noqon doona sanadkaan gooldhaliyaha ugu goolasha badan sanadkaan cayaaraha aduunka ,waa su'aalo aan jawaabtooda heli doono 11-ka luulyo.